Nin muddo 15 sano ah aan shaqadiisa xaadirin bil kastana mushaarkiisa heli jiray! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Nin muddo 15 sano ah aan shaqadiisa xaadirin bil kastana mushaarkiisa heli...
Nin muddo 15 sano ah aan shaqadiisa xaadirin bil kastana mushaarkiisa heli jiray!
Ninkaan wuxuu shaqaale dowladeed ka ahaa isbitaal ku yaalla Calabria
Italy (Halqaran.com) – Ninkaan oo u shaqeynayay mid ka mid ah isbitaalada Talyaaniga ayaa lagu eedeeyay in uusan soo xaadirin shaqadiisa muddo 15 sano ah, waxa uuna bil kasta heli jiray mushaarkiisa oo dhammeystiran, sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah.
Ninkaan ayaa loo heystaa inuu joojiyay inuu u soo shaqo tago isbitaalka Ciaccio ee ku yaalla koonfurta magaalada Catanzaro sanadkii 2005-tii.
Waxaana la sheegay guud ahaan lacagta la siiyay muddadaas in ay gaareyso 464,000 oo Pound oo u dhiganta $647,592.
Waxaana baaritaan lagu ogaaday in ninkaan uu u hanjabi jiray gabar madax ka aheyd isbitaalka uu u shaqeyn jiray, waxaana sheekadiisa la ogaaday markii gabadhii madaxda ka aheyd isbitaalka ay shaqada ka fariisatay.
Muddo 15 sano ah
Mushaarkiisa heli jiray
Shaqada soo xaadirin